JAALALLI DHUGAAN ISA KAMI?-AMALA moo FUULA waliin jiraatta?-Lati Hirpa Hunde – Beekan Guluma Erena
JAALALLI DHUGAAN ISA KAMI?-AMALA moo FUULA waliin jiraatta?-Lati Hirpa Hunde	Beekan Erena
Fiilmii, General Category, Poems, Seenaa, Tiyaatira January 16, 2017JAALALA DHUGAA
261SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
JAALALLI DHUGAAN ISA KAMI?-AMALA moo FUULA waliin jiraatta?
Lati Hirpa Hunde
Dhiiras haa taanu, shamarran yeroo umuriin keenya jaalala akka jalqabnuuf nuuf eyyamu irraa kaasnee waa’ee egeree nama waliin gaa’ela godhannu ni yaadna. Ulaagaalee tokko tokkos sammuu keenya keessatti kuufanna. Ulaagaalee sammuu keenya keessatti kuufanne kana irratti hundoofnee nama ilaallanna. Ulaagaa namni sammuu isaa keessatti kuufatu kunis hubannaa nama sana irratti hundaa’a.
Waan hunda dura hubannaan baayyee barbaachisaadha. Sababni isaas hubannaan nama eegdi. jaalalli namoota lama gidduu dabalaa ykn hir’ataa adeemu danda’a hubannaa namoota sanaa irratti hundaa’ee. Kanaaf jaalala kana sirriitti kunuunsee kan guddisu hubannaa namootni kun qabanidha. Konkolaataan tokko adeemuuf boba’aa(gases) fi waantota tokko tokko isa barbaachisa. Waantota barbaachisan kana hubatee kan guutu abbaa konkolaataa sana dha. Akkasuma warri wal jaallatan lamaan fedhii fedhii isaanii waliif hubatanii yoo waliif hin gunne, jaalalli isaan gidduu hir’achaa adeema.
Egaa ulaagaalee nama baayy’ee keessaa bareedinni qaamaa ulaagaa jalqabaa ta’uu mala. Bifti keenya amma fedhe yoo bareede iyyu, amalli fi ilaalchi keenya bareedaa miti taanaan bu’aa hin qabu. Ammuma umuriin keenya dabalaa adeemu bareedinni bifa keenyaa immoo hir’isaa adeema. Kun dhugaa wal nu hin mormisiifnedha. Bifti keenya waggaa lamaan darbee fi har’aa tokko miti; kan har’aa fi kan waggaa lamaan dhufuus tokko miti. Amalli garuu guddachaa ykn fooyya’aa adeemuu danda’a. Amalli koo isa wagga darbee irra, barana bareedaa ta’uu mala; waggaa dhufus kana caalaa bareeduu danda’a. Amalli bareedaan guddachaa adeema malee hir’isaa hin adeemu.
Bifti walitti nama hin hambisu. Garuu, amalli walitti nama hambisa. Namni ija isaa bifa irratti xiyyeeffatu iddoo tokko hin taa’u. Akka namni yeroo hunda wal yaadu ykn wal hawwu kan godhu bareedina amala dha malee bareedina qaamaa miti. Kanaaf bareedina qaamaa osoo hin taane, bareedina amalaa ti walitti nama hambisa. Kana hin dagatiinaa: amalli bareedaan bifa keenyas ni bareecha; ammalli fokkisaa garuu bifa bareedaas ni balleessa!
Kana hunda yeroon jedhu bareedinni qaamaa barbaachisa miti jechuu koo osoo hin taane, bareedina amalaaf dursa(priority) haa laannu jechuu kooti. waan hunda dura bareedina qaamaa ilaaluun aadaa hunda keenya keessa jiru dha. Yoo bifti nama sanaa bareedee amalli isaa immoo akka eelee sibiilaa nama guba ta’e, waliin jiraachuun rakkisaadha. “Simboon nama irraa ni darbiti; miidhaginnis nama ni gowwoomsiti.” Kanaaf yoo baayyee waa’ee bareedina qaamaa irratti xiyyeeffanne, Yeroo inni hir’isaa adeemu(beauty fades with age) sadarkaan gammachuu keenyaa gadi bu’aa adeema. Gogaan qaama keenyaa kun dullooma adeema. Garuu, amalli keessa keenya yeroo hunda nu waliin jiraata.
Namni baayy’een nama biratti fudhatama argachuuf jedhee bareedina qaamaa isaa kana eeggachuuf waan baayy’ee godha. Dibata adda addaa dibachuu, nyaata filatanii nyaachuu, guddinaaf jabeenya qaamaa(gym) hojjechuun of miidhagsu. Kana hunda irraa mormii hin qabu; barbaachisaa dhas. Garuu, nama birattis ta’e waaqa biratti fudhatama guddaa kan qabu bareedina amala isa ta’e kana irratti namni xiyyeeffannaa godhu muraasa dha.
Kanaaf jaalallee obsa, hubannaa, ogummaa, kabaja, iftoomina, jaalala qulqulluu, garraamummaa, walumaa galatti amala fi ilaalcha gaarii qabdu/qabu irratti xiyyeeffachuun jireenya namaaf salphisa. Namni kan wal jaallatu ykn wal fuudhu yeroo dheeraa waliin jiraachuufidha. Akka namni yeroo dheeraa waliin jiraatu kan godhu ykn tokkummaa namoota lama gidduu tti kan tiksu bifa osoo hin taane, amala dha. Nageenya sammuu kan namaaf kennu nama amala gaarii qabudha. Barreeffama kana keessatti of ilaaluun waan baayyeef nu gargaara!
Lati H. Hunde
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa261SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DUBBISUUN DIRQAMA:XUMURA ABBOOTII IRREE:Gaafii Ummataa waliin Dhahanii Bira Darbuuf Yaaluun Essanuu Nama Hin Gahu! Baarentuu Gadaa Irraa///
JAALALLI DHUGAAN KANAA?Dubartoota Gammachiisuuf Dhiirri Wantoota armaan gadii kana gochuu qaba jedha Obbo Gammadaa Olaanaa-Xiinxalaa, dubbisaa, waliif daddabarsaa!! →